ILansdowne encinci emangalisayo NgeNgeno laBucala
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguLaura
I-Little Lansdowne yindawo entsha eyilwe entle enegadi yokubuyela kumhlaba wekhaya likaLaura noMarshall. Ukuhamba nje imizuzu embalwa ukusuka elunxwemeni le ndawo inobunewunewu inomnyango wayo wabucala, ibhedi enkulu, igumbi lokuhlambela le-en-suite kunye nendawo yegadi. Amalaphu anobunewunewu, izibane ze-LED ezibenyazelayo, ezakhelwe kwizithethi zeBluetooth, ukufudumeza ngaphantsi, isiselo esishushu esenza isikhululo sikamabonwakude esinomboniso wasimahla kunye neWiFi yasimahla yenza amava ayi-5 * ngeqhezu leendleko.
Le yindawo yabucala yokuzimela egadini. Igumbi lokulala elikhulu lalinomgangatho ophantsi wethayile wokufudumeza ngeentsuku zasebusika kunye neengcango zepatio egadini kangangeentsuku okanye ubusuku obushushu kunye nethayile yakho yokutya okanye uphumle nje.
Izibane ze-LED ezilawulwa kude, ezakhelwe kwizithethi zeBluetooth, ishawari ye-en-suite kunye nesitya, iti kunye nezixhobo zokwenza ikofu kwigumbi. Indawo yokomisa iinwele kunye nezinto zangasese ezibalulekileyo ziyafumaneka.
4.82 · Izimvo eziyi-149
Sibekwe kwisitalato sokuhlala esithe cwaka imizuzu emi-5 ukuya elunxwemeni. Uya kufumana iivenkile, imivalo kunye neeresityu kumgama wokuhamba okanye idrayivu emfutshane.
ULaura noMarshall basoloko befumaneka kwiingcebiso zasekuhlaleni kunye nolwazi ngesitayela sabo esikhululekileyo esinobuhlobo. Imiyalezo yeWhat's app yamkelekile ngexesha lokuhlala kwakho. Ekufikeni kwazo zonke izibonelelo ziya kuxoxwa kwaye iphepha lengcaciso elineenkcukacha lixhonywe kwigumbi. Iimephu zengingqi kunye neencwadi ezinomdla nazo ziyafumaneka kwigumbi lakho.
ULaura noMarshall basoloko befumaneka kwiingcebiso zasekuhlaleni kunye nolwazi ngesitayela sabo esikhululekileyo esinobuhlobo. Imiyalezo yeWhat's app yamkelekile ngexesha lokuhlala…